ခင်ပွန်းသည်ရှိရာ အီတလီနိုင်ငံကို တစ်ယောက်တည်း လေယာဉ်စီးကာ လမ်းတဝက်ရောက်မှ အိမ်ကို လွမ်းကြောင်း ပြောလာတဲ့ ချမ်းချမ်း – Cele Oscar
ခင်ပွန်းသည်ရှိရာ အီတလီနိုင်ငံကို တစ်ယောက်တည်း လေယာဉ်စီးကာ လမ်းတဝက်ရောက်မှ အိမ်ကို လွမ်းကြောင်း ပြောလာတဲ့ ချမ်းချမ်း
January 26, 2021 By L YC Celebrity
အဆိုတော် ချမ်းချမ်းက တော့ အနုပညာလောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အောင်မြင်မှုတွေရ ရှိထားတဲ့ သူတစ်​ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကိုလည်း များစွာရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူမက အချစ်သီချင်းတွေသာမကပဲ အသည်းကွဲသီချင်းတွေကိုလည်း စိတ်ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုလေ့ရှိသူပါ။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ ထွက်ရှိတဲ့ သီချင်းတိုင်း ကလည်း ပရိသတ်တွေအကြိုက်နဲ့ထက်တူကျတာဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ နေပါတယ်။
ချမ်းချမ်းက သူမရဲ့ လူနေမှု့ဘဝကို ပရိသတ် တွေထံ အမြဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြလေ့ရှိတာဖြစ်ပြီး မကြာသေးတဲ့ အချိန်ကာလ တစ်ခုကလည်း ဒုတိယမြောက်ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရကြောင်း ဖွင့်ဟလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ချမ်းချမ်းက မိခင်စိတ်အပြည့် ရှိသူဖြစ်လို့ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရချိန်မှာ ဂရုတစိုက်နဲ့ ရင်သွေးလေးအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကိုပဲ ဖန်တီးပေးလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိမှာလည်း ချမ်းချမ်းက သူမရဲ့ ခင်ပွန်းသည် ရှိရာ အီတလီနိုင်ငံကို သွားရောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထား ရပေမယ့်လည်း စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ ချမ်းချမ်းက တစ်ယောက်တည်း လေယာဉ်စီးကာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ရပ်နားရာ ခရီးတဝက်ရောက်ချိန်မှာတော့ ” First transit in Korea ..incheon airport!!! I feel healthy and fine!!15 hours transit time in Korea…..takingarest and look around the shopping mall inside the airport. Miss my home ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ပုံလေးတွေ နဲ့အတူ တင်ပေးလာတာကြောင့် ချစ်ပရိသတ်တွေ သိရှိစေဖို့အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေကလည်း ချမ်းချမ်းရဲ့ ခရီးလမ်းအဆင် ပြေချောမွေ့စေဖို့အတွက် ကောမန့်မှာ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအုန်းနော်။
သတင်းအရင်းမြစ်: Source – Chan Chan’s Facebook Account
အဆိုတျော ခမျြးခမျြးက တော့ အနုပညာလောကမှာ ဒိတျဒိတျကွဲ အောငျမွငျမှုတှရေ ရှိထားတဲ့ သူတဈ​ယောကျဖွဈပွီး ပရိသတျအားပေးမှုကိုလညျး မြားစှာရရှိထားတာဖွဈပါတယျ။ ဆယျစုနှဈတဈခုကွာ အနုပညာ အလုပျတှကေို ကွိုးစားလုပျကိုငျခဲ့တဲ့ သူမက အခဈြသီခငျြးတှသောမကပဲ အသညျးကှဲသီခငျြးတှကေိုလညျး စိတျခံစားခကျြအပွညျ့နဲ့ သီဆိုလရှေိ့သူပါ။ ဒါ့အပွငျ သူမရဲ့ ထှကျရှိတဲ့ သီခငျြးတိုငျး ကလညျး ပရိသတျတှအေကွိုကျနဲ့ထကျတူကတြာဖွဈလို့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ထိပျတနျးအဆိုတျောတဈယောကျဖွဈလို့ နပေါတယျ။
ခမျြးခမျြးက သူမရဲ့ လူနမှေု့ဘဝကို ပရိသတျ တှထေံ အမွဲပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးခပြွလရှေိ့တာဖွဈပွီး မကွာသေးတဲ့ အခြိနျကာလ တဈခုကလညျး ဒုတိယမွောကျကိုယျဝနျလှယျထားရကွောငျး ဖှငျ့ဟလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ခမျြးခမျြးက မိခငျစိတျအပွညျ့ ရှိသူဖွဈလို့ ကိုယျဝနျလှယျထားရခြိနျမှာ ဂရုတစိုကျနဲ့ ရငျသှေးလေးအတှကျ အကောငျးဆုံးဆိုတာတှကေိုပဲ ဖနျတီးပေးလရှေိ့တာဖွဈပါတယျ။
ယခုလကျရှိမှာလညျး ခမျြးခမျြးက သူမရဲ့ ခငျပှနျးသညျ ရှိရာ အီတလီနိုငျငံကို သှားရောကျနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ကိုယျဝနျလှယျထား ရပမေယျ့လညျး စိတျဓာတျခိုငျမာတဲ့ ခမျြးခမျြးက တဈယောကျတညျး လယောဉျစီးကာ မွနျမာနိုငျငံမှ ထှကျခှာလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လယောဉျရပျနားရာ ခရီးတဝကျရောကျခြိနျမှာတော့ ” First transit in Korea ..incheon airport!!! I feel healthy and fine!!15 hours transit time in Korea…..takingarest and look around the shopping mall inside the airport. Miss my home ” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ပုံလေးတှေ နဲ့အတူ တငျပေးလာတာကွောငျ့ ခဈြပရိသတျတှေ သိရှိစဖေို့အတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။ ပရိသတျတှကေလညျး ခမျြးခမျြးရဲ့ ခရီးလမျးအဆငျ ပွခြေောမှစေ့ဖေို့အတှကျ ကောမနျ့မှာ ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွပါအုနျးနျော။
သတငျးအရငျးမွဈ: Source – Chan Chan’s Facebook Account
အလှတွေ ပေါ်လွင်စေတဲ့ အိချောပို ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး